Ungawubhala Kanjani Umbhalo Wevidiyo Onamandla Nophumelelayo | Martech Zone
ULwesihlanu, July 24, 2020 ULwesihlanu, July 24, 2020 Douglas Karr
Ngiphetha ngokukhiqiza i-video echaza iklayenti lethu kuleli sonto. Kube inqubo elula, kepha bekubalulekile ukuthi nginciphise iskripthi ukuqinisekisa ukuthi sifushane, sinomthelela, futhi sisebenza kahle ngangokunokwenzeka ukuqinisekisa Ividiyo echazayo inomthelela omkhulu.
Izibalo zamavidiyo ezichazayo
Ngokwesilinganiso, ababukeli bukela amasekhondi angu-46.2 wesekhondi elingu-60 ividiyo echazayo
Indawo emnandi yobude bevidiyo echazayo yile Imizuzwana engu-60-120 ngezinga lokugcinwa kwezithameli elingu-57%
Amavidiyo achazayo ngaphezu kwamasekhondi ayi-120 thola kuphela u-47% wokugcinwa
Izilaleli amazinga okugcinwa ehla kudlule ngokucacile umaki wemizuzu engu-2
Ukutshalwa kwezimali kuvidiyo yokuchaza kuyadingeka uma inkampani yakho iqhubeka nokuba nobunzima bokuchaza nokukhombisa izinqubo zayo kulabo abazoba abathengi. Ngifisa sengathi wonke amaklayenti ethu angenza njalo tshala imali okungenani ividiyo eyodwa yokuchaza. Bangu izinhlobo eziningi zamavidiyo wokuchaza - futhi zingakhishwa ngendlela emangalisayo kusesho lonke, ukuseshwa kwevidiyo, kanye nemithombo yezokuxhumana.
Ithimba Isinkwa esingaphezu, inkampani yamavidiyo echazayo, ihlanganise i-infographic ebanzi engiyibonile echaza ukuthi ungayibhala kanjani kangcono iskripthi sakho sevidiyo esichazayo kule infographic, Ishidi Lokukhohlisa Lokugcina Lokubhala Imibhalo Yevidiyo Echaza. Amathiphu ochwepheshe afaka:
Sebentisa emagama lacondzisako nalabekelisekako
Fundisa futhi ujabulise
Gcizelela amagama akho nephimbo
Bhala sengathi uyakhuluma
Sebenzisa isakhiwo sokulandisa sakudala
IBreadnbeyond ikhumbuza ababhali beskripthi ukuthi bakhumbule njalo i- ini, lo ngubani, lo kungani, Kanye Kanjani. Leyo ifomula engiyithandayo. Izikripthi zami ziqala ngokwethulwa komlingiswa (umuntu ofana nezithameli zethu), inkinga abahlupheka nayo ( ini), ezinye izindlela emakethe esingazihlukanisa nazo ( kungani), nesixazululo samakhasimende ethu kanye nokubizelwa esenzweni (the Kanjani).
Sizama ukuqondisa isinqumo sokuthenga kanye nokwazisa ngomehluko wamakhasimende ethu!
Incazelo ye-Video Script Infographic
Tags: Isinkwa esingaphezuisichazamazwi sevidiyo esichazayoizibalo zevidiyo ezichazayoindlelaungawubhala kanjani umbhaloiskripthiiskripthi sevidiyo